Perlon maka akwarium, ihe dị mkpa maka akwarium gị. | Nke azụ
Natalia Cerezo | 12/08/2021 10:55 | Emelitere ka 12/08/2021 10:57 | Ngwa
Perlon maka akwarium bụ ihe ị nwere ike iji mee ihe nzacha, nwere ọtụtụ uru, nke ahụ nwere ike inye aka dị ukwuu idobe mmiri dị n'ime akwarium gị ma ị bụ ọkachamara ma ọ bụrụ na ị ka nabatara obere minnows mbụ gị.
N’isiokwu a anyị ga-ekwu maka ya kedu ihe a na -adọrọ mmasị, kedu uru ọ nwere, ka esi eji ya, ugboro ole ka ọ ga -agbanwe… Na ọtụtụ ndị ọzọ. Gwakọta akụkọ a na nke ọzọ ihe nzacha mpụga maka akwarium iji webata gị ụwa na -atọ ụtọ nke nzacha akwarium!
3 Otu esi etinye perlon na nzacha
4 Ugboro ole ka a ga -agbanwe nzacha perlon?
5 Enwere ike ịsacha greyhound n'ime akwarium?
6 Ọ ka mma perlon ma ọ bụ ogbo?
7 Na perlon ma ọ bụ owu?
8 Mmechi: iji greyhound n'ime akwarium, ee ma ọ bụ mba?
9 Ebe ịzụta perlon dị ọnụ ala
Gịnị bụ perlon
JBL Symec Ft ute ...
Zoobest Perlon maka ...
Greyhound bụ a eriri sịntetik, yiri nnọọ owu, nke a na -eji eme ihe n'ihi ike nzacha pụrụ iche ya. Agbanyeghị na enwere ike iji ya maka ụdị nzacha niile, ojiji ya na -ewu ewu nke ukwuu dịka nzacha akwarium.
Akwa perlon, dịka anyị kwuru, bụ ihe sịntetik, nke ejiri ya mee ga -enwerịrị ọgwụgwọ iji nweta udidi na akụrụngwa na -eme ka o yie owu. Emere ya site na nịlọnị nylon atọ dị iche iche (akwa, ụlọ ọrụ na eriri siri ike). A na -erekarị ya na ngwugwu (dị ka ngwugwu owu a na -ahụkarị na ngwa enyemaka mbụ), n'agbanyeghị na ebe ụfọdụ ị nwekwara ike ịhụ ya na nnukwu.
Uru nke greyhound na akwarium
El perlón para acuario tiene un montón de ventajas para mantener tu acuario limpio na azụ gị nwere obi ụtọ. Dị ka ọmụmaatụ:
Ọ bụ material muy elástico, nke na -adabara mkpa gị nke ọma (n'agbanyeghị na -akpachara anya ka ị ghara ịgbatị ya nke ukwuu ma ọ bụ na ọ ga -efunahụ ihe nzacha ya)
Se limpia n'ụzọ dị mfe.
Es dị ọnụ ala.
Otu esi etinye perlon na nzacha
Perlon ejighi ya bụrụ mkpanaka nkụ na nyo Ma ọ bụ ya, mana ihe ọzọ na -esonyere ya, sponge foamex, nke na -ahụ maka inyocha ihe ndị kacha sie ike.
Ihe kachasị mkpa bụ, a la hora de montar el filtrado, pongas primero la esponja de foamex. Ngwa a bụ nke mbụ ga -agafere mmiri ruru unyi nke na -esite na akwarium, ebe ọ bụrụ na ọ bụrụ na etinyere ya elu, akụkụ ahụ niile ga -anwa ịgafe perlon n'otu oge, nke 'ga -akpọchi' ya ma kpatara ya. mmiri ahụ nke na -agaghị agbapụta, nke, n'elu nke ahụ, nwere ike gbanwee gburugburu ebe azụ gị bi.
Na nchịkọta: Nọgide na -etinye ogbo foamex n'ihu perlon.
Ugboro ole ka a ga -agbanwe nzacha perlon?
O yighị ka enwere ọtụtụ nkwekọrịta mgbe ị na -ekpebi mgbe ị ga -agbanwe nzacha perlon. Ụfọdụ ndị ọkachamara na -ekwusi ike na a ga -agbanwe ya kwa izu abụọ, ndị ọzọ na ịsa ya ezuola ... n'agbanyeghị Ọ dị ka ihe kacha eme bụ ịsacha ya (n'okpuru anyị ga -agwa gị otu) ruo mgbe ọ dara wee kwụsị nzacha nke ọma., mgbe ahụ ee ọ ga -abụ oge itinye mpempe perlon ọhụrụ n'ime akwarium gị.
Ọtụtụ mgbe Mgbanwe a ga -adabere na akwarium gị, ugboro ole ị na -ehicha sponge nke ọzọ yana nlekọta ị nwere na greyhound: mgbanwe ahụ nwere ike ịbụ site n'izu ole na ole, ruo ọnwa ruo ọbụna otu afọ.
Enwere ike ịsacha greyhound n'ime akwarium?
Ị nwere ike, na n'ezie a na -atụ aro ya nke ukwuu maka na ụzọ ahụ ọ dịghị mkpa ịdị na -agbanwe ya abụọ abụọ. Naanị ihe ị ga -eburu n'uche bụ na ịnweghị ike iji mmiri pọmpụ greyhound (ma ọ bụ, n'agbanyeghị, sponge foamex), n'ihi na nke a ga -eme ka ịdị ndụ nke mmiri dị na tankị ghara ịdị. Ọ ka mma na ị na -eji mmiri akwarium n'onwe ya sachaa ha ma wepụ unyi niile ha kpakọbara.
Ọ ka mma perlon ma ọ bụ ogbo?
Maka otu ma ọ bụ nke ọzọ: nkịta na sponge ga -agakọ ọnụ, ebe ọ bụrụ na ị tinye naanị otu iche, ọrụ ya agaghị adị mma. Yabụ, ọ bụrụ na anyị etinye naanị perlon, unyi dị na mmiri ga -etinye ihe nzacha ozugbo ma ọ gaghị enwe ike ịmịcha ihe niile, nke, n'ezie, ga -emetụta ịdị mma na nghọta nke mmiri n'ime akwarium gị.
Kama, ọ bụrụ na anyị etinye naanị ogbo, ọ bụ naanị ihe ndị kacha sie ike ka a ga -ehicha, ka ndị kacha mma wee gaa n'ihu na -emetọ mmiri. Ọ dị ka ịrụ ọrụ ahụ na ọkara, yabụ ọ dị mkpa iji opekata mpe ogbo na perlon (enwerekwa ndị na -eji ihe nzacha ihe dị ka seramiiki ma ọ bụ cannulas, nke na -enye ohere ịnabata nje na gbanwee ka ọ bụrụ ihe bara uru maka gị. Mana nke a bụ isiokwu ọzọ anyị ga -ekwu maka oge ọzọ).
Ka o sina dị, a ga -eji sponge mee ya. Ọ bụghị ihe dị oke ọnụ ma enwere ike ịsacha ya, dị ka aquarium perlon, yabụ ọ ga -anọ ogologo oge. Ihe a nwere nguzozi zuru oke na porosity iji rụọ ọrụ nzacha a na akwarium.
Na perlon ma ọ bụ owu?
Agbanyeghị na nlele mbụ ha yiri otu, Ha bụ ihe dị iche iche, ebe ọ bụ na perlon, ịbụ ihe sịntetik, na -aka nke ọma, na -adịte aka, ọ naghị adaN'adịghị ka owu, nke nwere ike ime ka mmiri gị yie nkịta ọhịa.
Ọ bụrụ maka ihe ọ bụla Ị nweghị ike ịhụ nkịta, ị nwere ngwọta abụọ: Nke mbụ, jiri owu wee lelee nzacha ahụ kwa ụbọchị iji zere ọnyá na mmebi. Nke abụọ, jiri ndochi kwushin sịntetik, nke a na -akpọ wadding. Ngwa a yiri perlon. N'ịbụ nke sịntetik, ọ naghị ada ada, ọbụlagodi na ọ naghị arụ ọrụ nke ọma, ọ nwere ike wepụta gị ebe siri ike.
Agbanyeghị, anyị na -akwado: ọ ka mma ịghara ịchọ ndị nnọchi anya greyhound, ihe dịlarị ọnụ ala ma na -arụzu ọrụ ya nke ọma.
Mmechi: iji greyhound n'ime akwarium, ee ma ọ bụ mba?
Perlon dị mfe iji, ọ chọghị mmezi oke (n'agbanyeghị na nke ahụ dabere na nke ọ bụla na akwarium gị, n'ezie), ọ dị ọnụ ala ma dịkwa mfe nhicha. Naanị ị ga -ejikọ ya na ogbo ka nzacha ya wee bụrụ nke ziri ezi, hụkwa na ọ bụghị owu organic ka ọ ghara imechi ma ọ bụ mebie ya.
Na nkenke, ihe a nwere ike bụrụ nnukwu njikọ iji mee ka akwarium gị dị ọcha na obere irighiri ihe.
Ebe ịzụta perlon dị ọnụ ala
Enwere ezigbo ebe abụọ ị nwere ike zụta gourd dị ọnụ ala na nke kacha mma maka akwarium gị.
Nke mbụ, n'ime Amazon Ị ga -ahụ ọtụtụ ụdị na ọnụahịa dị iche iche nke perlon maka akwarium. Dabere na ego ịchọrọ (ọ bụ ezie na ịkwesighi ịzụta ọtụtụ ihe iji mee ka ọ rụọ ọrụ, ebe ọ bụ na, dị ka anyị kwuru, enwere ike ihicha ya ma nọrọ ogologo oge), ọnụ ahịa ya dị ihe dị ka € 3 kwa 100 g. Na mgbakwunye, ọ bụrụ na ịnwe Prime, ọ ga -akpọbata gị n'ụlọ n'oge adịghị anya.
Nke abụọ, ị nwere ike ịga ụlọ ahịa ọpụrụiche maka anụmanụ dị ka Kiwoko. Ihe dị mma gbasara ndị a bụ na, ọ bụrụ na ha nwere ụdị anụ ahụ, ị ​​nwere ike gaa n'onwe gị hụ ngwaahịa ahụ wee zụta ya ebe ahụ. Ihe dị njọ bụ na, ka ị ghara ịkwụ ụgwọ mbupu, n'ọtụtụ ị ga -eme obere iwu. Ọnụahịa ahụ yiri nke Amazon, ihe dịka € 2,5 kwa 100 g nke ngwaahịa a.
Akuku aquarium greyhound bụ a ihe nzacha na -enyere aka mee ka mmiri kristal doo anya maka ike nzacha ya nke ukwuu, n'agbanyeghị na ọ bụghị mmadụ niile nwere otu ahụmịhe. Gwa anyị, kedu ka nke gị mere? Kedu ihe ị chere maka ihe a? Kedu ka ị ga -esi edozi akwarium gị?
Fuentes: Mmiri mmiri mmiri, Azụ aquarium
Pathzọ zuru ezu na edemede: Azu » Ngwa » Perlon maka akwarium